Ndị na-emepụta ihe n'èzí & ndị na-ebubata ihe - Ụlọ ọrụ n'èzí China
N'èzí Tactical Nnukwu ikike 100L Oxford Waterproof Rucksack
Nnukwu ike Tactical rucksack 100L, n'ime ya na aluminom etiti ka a ga-esetịpụ ya na ikike kachasị, eriri mma kpara nke ọma gbachiri site n'elu ruo na njedebe ka ọ bụrụ ihe siri ike, kechie ya na oghere imeghe ma mechie, 2.4KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 2003
Agba:Coyote ma ọ bụ dị ka ahaziri
Camouflage ịchụ nta akpa azụ mmiri na-adịghị
Akpa azụ ịchụ nta nke mmiri na-adịghị n'èzí, nke nwere eriri siri ike na eriri dị n'akụkụ, obere akpa 2 nwere ike ịkwanye ọtụtụ ihe n'ime, eriri n'úkwù iji kesaa nrụgide na eriri ubu ọnụ, 1.35KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 2004
Nha:13.5L * 8W * 20H inch
Agba:Camouflage ma ọ bụ dị ka ahaziri
Ngwugwu ụbọchị bọọlụ basketball n'èzí
Egwuregwu Gym basketball, akpa azụ azụ, uwe na-eguzogide, mkpuchi mmiri na akwa oxford na-adịgide adịgide, mkpọ ụbọchị arụrụ arụ ọrụ maka kọmputa, I-pad, bọọlụ na ihe ndị ọzọ eji eme kwa ụbọchị, Akpa 5 – 2 n'ihu akpa, 2 n'akụkụ akpa na 1 etiti nnukwu akpa. , ụdị unisex, 1.1 KGS kwa ibe.
Ihe No.LSB 2005
Nha:12.6L * 9.8W * 19.7H inch
Ihe:600D Polyester PU mkpuchi
Agba:Green gbara ọchịchịrị ma ọ bụ Camouflage ma ọ bụ dị ka ahaziri